University of Montreal - Study in Canada. Waxbarashada Abroad
gaabinta : UdeM
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Montreal
Qor at University of Montreal
The University of Montreal waa jaamacadda cilmi baarista guud ee Montreal a, Quebec, Canada. hay'ad The fransiiska oo ka kooban saddex iyo toban kulliyadood, laba ka badan lixdan waaxaha iyo dugsiyada xiriirta: Hôtelière Polytechnique ah (School of Engineering) iyo HEC Montreal (School of Business). Waxay bixisaa in ka badan 650 barnaamijyada iyo barnaamijyada ka qalin undergraduate, lugu daro 71 barnaamijyada phD. University qiimeynta waxbarashada Times Higher Adduunka ee 2014-2015 Jaamacadda Montreal kaalinta at kaalinta 113th adduunka. The jaamacadda Université de Montreal u sameeyey si uu booska 83aad ee dunida oo dhan sida ay Symonds Quacquarelli ah (QS) qiimeynta University Adduunka 2014-2015 (category undergraduate).
Jaamacadda waxay leedahay dakhli Quebec ee ugu weyn damaanadqaaday cilmi iyo kii saddexaad ee ugu weyn Canada, qoondaynta u dhow $524.1 million si ay cilmi baaris ay sameeyeen in ka badan 150 xarumaha cilmi-baarista sida 2011. Sidoo kale waa qayb ka mid ah jaamacadaha ugu U15. In ka badan 55,000 ardayda ku qoran barnaamijyada undergraduate iyo graduate, yelsinkii jaamacadda labaad ee ugu weyn ee Kanada marka la eego diiwaan gelinta ardayga.
Xarunta Canadian waayo, Jarmal iyo European Studies
Xarunta Khayraadka Isbaanish
Xarunta Daraasaadka Qadiimiga ah
Xarunta East Studies Asian (CETASE)
Xarunta Daraasaadka Ethnic of Montreal Jaamacadaha
Xarunta Daraasaadka Qarniyadii
Department of lanad
Department of Studies Ingiriisi
Department of Faransiis-Language Literatures
Department of Juqraafiga
Department of History Art iyo Film Studies
Department of Science Computer iyo Research Hawleed
Department of Luuqadaha Iyo Tarjamada
Department of Suugaanta barbardhiga
Department of Literatures iyo Languages ​​of Adduunka
Department of Suugaanta iyo Modern Languages
Department of Mathematics iyo Statistics
Information Center Waxbarashada Technology (DESI)
Xarunta Waxbarashada Luqadda iyo Dibadda Dhaqammada
Montreal Center ee Daraasaadka Caalamiga ah (CÉRIUM)
School of Library iyo Information Science
School of dhimirka
School of Relations Warshadaha
Adeegyada Taageerada ee iskujir Waxbarashada iyo Guusha Ardayga (SAFIRE)
Kuliyada Waxbarashada Continuing
Department of dib u Ilkaha
Ilkaha Department of Health Oral
Xarunta Tababarka Macallimow
Waaxda Maamulka iyo Foundations Waxbarashada
Department of Psychopedagogy iyo Andragogy
Kuliyada Design Environmental
Institute of Planning Urban
School of Muuqaal Architecture
Barnaamijka Design Gudaha
Kuliyada Studies Graduate
Department of Deegaanka iyo Caafimaadka Shaqada
Department of Medicine Qoyska
Waaxda Maamulka Caafimaadka
Waaxda ayidhi iyo immunology
Department of dhalmada iyo dumarka
Department of Pathology iyo Biology gacantu
Department of Raajada, Radio-burada iyo caafimaadka nukliyeerka
Department of Social iyo Medicine hortagga
Department of Qalliinka
School of Hadalka Therapy iyo Maqalka
Kuliyada Theology iyo Diinta Sciences
Department of Pathology iyo ayidhi
School of indhaha
Sida machad, Jaamacada markii ugu horaysay la aasaasay markii Laval jaamacadda Université ee Quebec City aasaasay laan cusub ee Montreal ee 1878, qui est devenu yaqaano sida University of Laval ee Montreal. Tani waxay marka hore ku kacay rabitaanka Prelate Montreal ee, kuwaas oo ku dooday in jaamacadaha madax-bannaan ee magaaladiisii. qeybo ka mid ah xarumaha waxbarashada ee xannaanada, sida kuwa de Séminaire ee Kubeek iyo Kuliyadda ee Medicine, aasaasay sidii School Montreal ee Daawada iyo Qaliinka, mar hore la aasaasay Montreal ee 1876 iyo 1843 siday u kala horreeyaan. Vatican ayaa siiyay jaamacadda qaar ka mid ah madax-bannaani maamul ee 1889, sidaas ogolaanin in ay doortaan Professor gaar ah iyo liisan shahaadado u gaar ah. Si kastaba ha ahaatee waxa aan ahaa ilaa 8 Laga yaabaa 1919 in charter a le'daan ka Pope Benedict XV siiyo madaxbannaani buuxda oo ay jaamacadda. Waxaa sidaas noqday jaamacadda ah Catholic madax banaan oo qaatay jaamacadda Université de Montreal sida ay magaca. Laval ka kooban by Wilfrid Beaudry waxaa ka go'an in ay ardayda ee Jaamacadda Laval iyo de jaamacadda Université ee Montreal. music ee biyaano waxaa la daabacay ee Kubeek by J. Beaudry, Ergo 1906.
Waqtiga Abuurkiisa, in ka yar boqol ardayda ayaa la dhigey saddex kulliyadood jaamacadda ee, oo wakhtigaas ayaa ku yaal Old Montreal. Kuwaasu waxay ahaayeen macalimiinta ee fiqiga (goobta site waa Grand seminary ee Montreal), kuliyadda sharciga (martigeliyay Society of Saint-Sulpice) iyo macalimiinta ee dawada (at Ramezay ee Chateau ah).
tababarka Graduate ku salaysan lagu daydo-u waxyoonay Jarmal American ee shaqada koorsada gaarka ah iyo dhamaystirka sha cilmi ah la soo bandhigay oo la ansixiyay. Inta badan goobaha waxbarashada Québec'ssecondary shaqeeya hababka Dabcan classic of tayo kala duwan. Tani qasbay jaamacadda si uu u furo dugsi udiyaarin in 1887 si la isu waafajiyo heerka waxbarasho ee ardayda u. magacaabay “Kuliyada Arts”, dugsiga la sii lahaa in la isticmaalo ilaa 1972 oo ahaa horreeyay ee nidaamka CEGEP hadda Kubeek ee.
Laba dugsi oo kala duwan ugu danbeyn noqday xulufo la ah jaamacadda. Midkii kowaad wuxuu u Polytechnique hôtelière, dugsi of injineernimada, taas oo la aasaasay 1873 oo noqday jaalka ah ee 1887. Kan labaad wuxuu ahaa ee hôtelière des Hautes Etudes Commerciales, ama HEC, taas oo la aasaasay 1907 iyo qayb ka mid ah jaamacadda ee noqday 1915. Dugsiga ayaa marka hore fransiiska oo naqshadda dhismaha ee Kanada furay 1907 at Polytechnique hôtelière.
Inta u dhaxaysa 1920 iyo 1925, toddoba kulliyadood cusub lagu daray in saddexda hore: Philosophy, Suugaanta, Sciences, caafimaadka xoolaha, qalliin ilkaha, Farmashiyaha iyo Social cilmiga. la xuso, Kuliyadda Cilmiga bulshada waxaa la aasaasay bishii 1920 by Édouard Montpetit, laic ugu horeeyay ee keeni awood a. Waxa uu intaas ka dib waa rumoobay doorka xoghayaha guud ee ilaa 1950.
In 1965, magacaabista Raktarka horeysay cilmaani jaamacadda ee, Roger Gaudry, jidka u bannaysay for casriyeynta. Jaamacadda aasaasay barnaamijka shahaadada waxbarashada dadka waaweyn ee ugu horeysay ee ay bixiyaan jaamacadaha a Faransiis Canada 1968. Oo sannaddaas ayaa haddadan Lionel-Groulx iyo3200 Jean Brillant dhismayaasha, hore ee loo magacaabay ka dib markii nationalist Quebec Lionel Groulx. sanadka soo socda, garaashka baabuurta la dhigto Louis Collin oo micnaheedu noqday bilad Governor General ee naqshadaha ee 1970 – la qotomiyey.
dhacdo muhiim ah in lagu calaamadeeyay taariikhda jaamacadda ee ahaa xasuuqii hôtelière Polytechnique. On 6 December 1989, nin hubaysan oo ku hubeysan qoriga a galay dhismaha hôtelière Polytechnique ah, dilka 14 dadka, dhammaan dadkaas waxay ahaayeen haween, ka hor inta uusan naftiisa qaadashada.
Tan iyo markii ay 2002, Jaamacada ayaa bilaabay mashruuc ay dhismaha ugu weyn ee tan iyo dabayaaqadii sannadihii 1960, shan dhismayaasha cusub oo casri ah loo qorsheeyay cilmi sare ee Farmashiiste, injineernimada, aerospace, waxbarashada kansarka iyo bayotechnoolajiyadda.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Montreal ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Montreal rasmiga ah Facebook
University of dib u eegista Montreal
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Montreal.